ခေါတောတွေဘာကြောင့် ဆဲကြသလဲ | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on August 7, 2014
Posted in: မွတ်စလင်ကုလားယုတ်များ, အစ္စလမ်ဘာသာ.	Tagged: ကုလားတို့ဆဲကြတယ်။, ဆဲဆိုခြင်း.	Leaveacomment
ကုလားတွေ ဘာကြောင့် ယုတ်မာ သလဲ ။ ဘာ့ကြောင့် သူများဘာသာကို ဆဲဆိုနေသလဲဆိုတာ..။ သူတို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကို က ဆဲဆိုတတ်ကြတယ်။ အထင်ကြီးချင်စရာပဲ..။
၂း၁၆၁။ ဧကန်အမှန် အကြင်သူတို့သည် တရားဒေသနာတော်များကို မယုံမကြည်သွေဖယ်ငြင်းဆန်၍ ကာဖစ်ရ်အဖြစ်နှင့်ပင်သေဆုံးကြ၏။ ယင်းသူတို့ အပေါ်၌ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျိန်ဆဲခြင်း၊ အပါးတော်စေတမန်များ (၏ကျိန်ဆဲခြင်း၊) လူများ(၏ကျိန်ဆဲခြင်း၊) အားလုံးတို့ (၏ ကျိန်ဆဲခြင်းသည် ကျရောက်အံ့။)
၅း၇၈။ အစ္စရာအီလီ မျိုးနွယ်တို့အနက်မှ “ကာဖိရ်”သွေဖည်ငြင်းပယ်ကြကုန်သောသူတို့မှာမူ (နဗီတမန်တော်) “ဒါဝူဒ်”နှင့်”မရ်ယမ်”(သခင်မ)၏သားတော်၊(နဗီတမန်တော်) “အီစာ” ၏ နှုတ်မှတစ်ဆင့် ကျိန်ဆဲခြင်းခံခဲ့ကြရ၏။ ယင်းကဲ့သို့ဘေးသင့်ခဲ့ကြရခြင်းမှ ၎င်းတို့သည် သွေဖည်ခဲ့ကြသည့်ပြင် အမြဲတစေ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်လေ့ရှိခြင်းကြောင့်ပင်တည်း။
အဲလိုပဲ ..။ မိန်းမတွေ လင်နဲ့ မအိပ်ချင်ရင်လည်း သူတို့ တမန်တော်ကြီးတွေက ဆဲကြတယ်။
“ခင်ပွန်းသည်က မိမိနှင့်အတူ လာအိပ်ရန်ခေါ်သောအခါ၊ ဇနီးမယားက လာခြင်းမရှိငြင်းဆန်၍နေခဲ့၏။ ထိုအခါ ခင်ပွန်သည်မှာ စိတ်ဆိုးလျက်အိပ်လိုက်လေ၏။ ကောင်းကင်တမန်များသည် ထိုအမျိုးသမီးအား မိုးလင်းသည်အထိ ကျိန်ဆဲကြ၏။ ” ၁။ ဗုခါရီ ၊မုစ်လင်မ်ကျမ်း။။။
ရှေ့က နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်သွားက နောက်နွားတစ်သိုက်ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်၏ တဲ့..။ အမိယုတ်ရင် နှုတ်ကြမ်းသလို မျိုးပေါ့..။
← မွတ်ဆလင်ကုလား မဒိမ်းသမားလက်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့(၁၀)ကျောင်းသူမအေးမြတ်သ
စစ်တွေ ဆေးရုံက ကလေးငယ် အီဘိုလာရောဂါ ဖြစ်ပွားနေခြင်း မဟုတ် →